Imihlinzo: Two Men arrested for assaulting a man with oranges in Tzaneen - imihlinzo
Namhlanje kwiMihlinzo: Sithini iSkeem
Kukho abafo ababini abatyholwa ngoku xuluba umntu ngama orange
Man assaulted with oranges in Tzaneen
Kukho amadoda amabini atyholwa ngoku xuluba omnye umfo ebebe sebenza kunye naye emveni kokuba beye abavisisana ngento ethile. Esisibini siye savalelwa ngamapolisa ngolwesibini ngesi sehlo batyholwa ngaso. Yeey! Eneneni alitshoni lingena ndaba…
Amapolisa athe ezimele atshayiswa ngumfo ebebemkhangela
Amapolisa aseWashington intlahla iwombethe. Lithe elinye lawo lizimele kwiRobots leva ngesithonga sisitsho emva apha kuye emotweni. Xa esithi, lomfo uye wema ngale yakhe imoto kwaye enento engathi unabo nobumnyama. Uthe ke xa ehoya lento imehleleyo wafumanisa into yokuba lomfo kudala bemkhangela, ebekwa netyala loku qhuba ephantsi kwempembelelo zotywala.
Nanku umnqa: Kukho umama wase India owayekhulelwe ngo1978, wazala emva kweminyake eyi38
Umama weNdiya owaye khulelwe ngo1978 uzele amathambo omntwana emveni kweminyaka eyi38
Lomama wathi ngelithuba ekhulelwe oogqirha bathi kuye amathuba okuba azale umntwana ophilileyo amfiliba. Ekuveni kwakhe ezondaba uyewenza amanye amatileletile. Waya kwindawo engenye eyokuzama ukulungisa lento. Kwathi ethubeni noko kwathi cwaka wacinga naye ukuba iye yalungiseka ingxaki le ebenayo. Kuthe ke emveni kwemi nyaka eyi38 waziva enentlungu, nento eliqhuma apha esiswini. Bathe ke oogqirha xa bemxilonga bacingela inokuba yiCancer kanti eneneni ngamathambo omntwana awaye mthwele kwiminyaka eyi38 edlulileyo. Baye bawakhupha ke ayokungcwatywa lomathambo.
Amasela othuswe ziibhokisi zomngcwabo eyadini yesinye iscrapyard ePitoli
Thieves scared by coffins
Kukho iScarpyard esise Pretoria, abaniniso bebexakene namasela atyhuthula imoto ezi bazi thengisayo. Beku ngaqhekezwa bebebuya ngoku lala… Baye bonela ethubeni kukuba ngamaxhoba beza necebo elinoku balekisa lamsela abaphilisa kakubi. Baye bacinga into yokuba abantu baya yoyika into edibene nabafileyo. Babeka ibhokisi zomngcwabo eziliqela apha kule yard yabo. Yaba kukugqibelisa kwawo amasela, azange aphinde abahluphe. Yeey! Boyika izi-Tonight… 🙂
SakhiMan: Emva kweminyaka eyi15 uyakrokra ukuba ayingo nyana wakhe lo!
USkahza emveni kweminyaka eyi15 uthe xa ejonga unyana lo wabo noGqabsi, wanesikrokro “kutheni ingathi ayingo nyana wam lo.” Aqonde ukuba makabe umntana, ayokwenza iblood test. Afowune ugqirha esithi, iziphumo ziphumile azasele esiza nenkosikazi leyo yakhe. Naye ke nyani atsho kuGqabsi ukuba kufuneka baye khona.
Xa befika phaya kwaGqirha athi ugqirha, “Eh into endiyi fumanisileyo yeyokuba umntana ayingo wakho Sakhza. Ewe ngowakhe uSisi yena lo, kodwa wena awunguye utata wakhe.” USakhza ajonge kuGqabsi, “Gqabsi ungazi phendulela uthini kulento ithethwa nguGqirha?” Athi uGqabsi, “hay tyhini ungandi sukeli, azange ndithi ndithwele umntwana wakho. Ndathi ndimithi kuwe, wena waphapha, wena wena wena…” Yeeey! Ugqabsi…uhamba yedwa 🙂
Sibamba ngazibini ngobukho benu nakulo umjikelo. Saku buya sibonane ngelizayo, kamnandi.
Don’t forget to signup above to get Imihlinzo straight in your mailbox.
Bonus: Best funny videos
‹ Imihlinzo: Lady Gaga plans to marry in space	› Imihlinzo: Kukho isibini esiwe eliweni sasweleka, besithatha iSelfie.